Safidy CamScanner tsara indrindra amin'ny taona 2020 - Android & iPhone - App
Safidy CamScanner tsara indrindra amin'ny taona 2020
CamScanner dia scan amin'ny fitaovana PDF ho an'ny finday avo lenta avy amin'ny mpamorona sinoa, INTSIG Information Co. Ltd.Araka ny efa fantatrareo, ny governemanta Indiana dia nametraka fandrarana ny fampiharana sinoa 59 eo ho eo.
Ka na dia mety misy aza ny fampiharana ao amin'ny Google Play Store sy App Store, dia azo heverina fa hesorina tsy ho ela amin'ireo sehatra roa ireo any India.
Raha toa ianao ka iray amin'ireo mpampiasa mavitrika an'ity fampiharana ity izay scanner antontan-taratasy dia mety mitady izay hisolo izany ianao.
Safidy CamScanner tsara indrindra:
Ity rindrambaiko ity dia novolavolain'i Google, PhotoScan dia safidy lehibe hafa iray izay tsy mamela anao hamaky maso ireo antontan-taratasinao isan'andro, fa ahafahanao manao sary an-tsary koa ireo sary sy scan azy io na dia somary maika aza ianao hanao scanner ny antontan-taratasyo.
Azonao atao ny manangona ireo sary namboarina ireo ho kopia nomerika ihany koa.
Ny Microsoft Office Lens koa dia rindrambaiko matanjaka be izay azonao ampiasaina hanoloana ny fampiharana CamScanner taloha amin'ny fitaovanao. Araka ny voalazan'ilay anarana, novolavolain'i Microsoft ny fampiharana ary avelany hitetika ny antontan-taratasy isan-karazany ny mpampiasa alohan'ny hamoahana azy ireo mivantana any Word na PowerPoint.
Safidy tsara kokoa io fampiharana io indrindra ho an'ireo izay efa tafiditra ao amin'ny ekosistra Microsoft.
Adobe Scan dia PDF Scanner miaraka amin'ny OCR. Azo antoka fa iray amin'ireo fampiharana voalohany tonga ao an-tsainao io rehefa mieritreritra safidy hafa amin'ny CamScanner ianao.
Ity rindrambaiko ity dia novolavolain'i Adobe ary azo raisina ho toy ny iray amin'ireo safidy azo itokisana indrindra amin'ny sokajy iray ihany. Azonao atao ny mametraka fotsiny ny Adobe Scan amin'ny fitaovanao finday maimaim-poana ary manomboka manadihady antontan-taratasy dieny izao. Ny fampiharana dia misy amin'ny telefaona iOS sy Android.
Androany, ny ankamaroan'ny olona dia mampiasa Google drive na manana izany amin'ny findainy nefa tsy tsapany akory fa afaka maka scan ireo rakitra ity app ity. Na dia mety hahagaga aza izany, Google Drive dia manana scanner namboarina tao amin'ilay fampiharana mihitsy.Ny sisa ataonao dia tsindrio fotsiny ny bokotra plus ary afaka manadihady mora foana ireo antontan-taratasy, rosia, ary naoty maro hafa ianao.
Ndao ho mahitsy eto, Google Drive dia tsy dia feno endri-javatra toy ny CamScanner, fa kosa manolotra fampiasa scan sy fampakaram-bady tsotra izay mety ho tena ilain'ny olona rehetra mitady fampiharana scanner tsotra.Google Drive koa dia manana ny detection edge sy ny fambolena miaraka amina tonian-dahatsoratry ny sary ao anaty app.
Ny iray amin'ireo antony lehibe indrindra mahatonga ny olona hisafidy ny Google Drive ho safidy CamScanner dia - mety ho tsotra be ity scanner ity ary mety tsy dia manana endri-javatra firy, fa afaka miala sasatra hatrany ianao fa eo am-pelatanana ireo antontan-taratasinao. Amin'izay, Google Drive dia mety ho mpisolo toerana tsara.
Na dia ambany dia ambany aza ny Google Drive amin'ny endri-javatra tsy toy ny fampiharana hafa. dia ny mandeha amin'ny fampiharana ho an'ny olona iray izay mitady fampiharana scanner tsotra be tsy misy endri-javatra avo lenta.Ary koa, Google Drive dia azo atokisana mora foana ary mora be ho an'ny olona ny mampiasa azy.
Scanbot dia mitovy amin'ny CamScanner amin'ny ankapobeny momba ny endriny natolotry ny fampiharana. Afaka maka scan ny karazana antontan-taratasy rehetra izy ary mamantatra azy ho azy ihany koa ny sisiny sy ny fambolena azy.
Misy ihany koa ny fizahana pejy marobe misy ary ny fanekena lahatsoratra OCR ihany koa. Ny fanekena ny lahatsoratra dia manampy ny mpampiasa hikaroka antontan-taratasy misy atiny ao anatiny aza. Noho izany, mety ho tena mahasoa ho an'ny rehetra izany.
TapScanner dia fampiharana fitiliana iray hafa miaraka amina endri-javatra toy ny OCR, scanning batch, ary endrika roa hafa tena mahavariana.Ny endri-javatra mahavariana voalohany dia ny hoe afaka maka sary telo eo ho eo ilay app raha hamorona antontan-taratasy notsongaina amin'ny antsipiriany. Saingy, ny hany olana amin'ity dia ny - amin'ny fitaovana sasany dia mety ho toa miadana kokoa noho ny fampiharana hafa izy io, fa io olana io dia takatra amin'ny fiasa.
Ny endri-javatra mahavariana hafa dia ny fahaizana manao sonia nomerika ireo PDF voatahiryo. Ity endri-javatra ity dia zavatra hafa ary tsy misy fampiharana scanner hafa fantatsika, tahaka ny ankehitriny, afaka manao. Betsaka ihany koa ny sivana toa an'i CamScanner hahazoana ny antontan-taratasinao araka ny itiavanao azy. Hanoro hevitra anao aho.
Ity dia fampiharana iray hafa izay antsoina hoe TurboScan - mamela anao hanao saika ny asa rehetra azon'ny CamScanner natao. Ity rindrambaiko ity dia misy ny detection auto edge, ny scanning maromaro ary ny endri-javatra maro hafa miaraka amina maody maranitra izay namorona kopia notarafina tsara kokoa ho an'izay mitady hitily ny antontan-taratasiny.
8. Scanner kely
Ity iray ity dia scanner tena maivana sy tsotra handinihana ireo rosia sy antontan-taratasy. Fantatra amin'ny fijerena ny sisin'ny antontan-taratasy ho azy izy io ary ny fitehirizana ilay rakitra ao amin'ny app Gallery anao.
Evernote Scannable dia safidy iray hafa amin'ny CamScanner ary izy io dia iray amin'ireo fampiharana tsara indrindra amin'ny fizahana antontan-taratasy.Afaka ampiasaina mora foana amin'ny findainao koa izy io. Aoka hatao,Raha mampiasa iPhone na iPad ianao dia azonao atao tsara ny mampiasa azy.Raha ampitahanao amin'ny CamScanner dia manome tolotra mitovy amin'izany i Evernote Scannable ary miaraka amin'ny traikefan'ny mpampiasa mahatalanjona.
Voalohany, azonao atao ny manara-maso ireo naoty amin'ny app, azonao atao aza ny maka sary an-tsaina ny carte d'exploitation na ny rosia ary ny antonta-taratasy taratasy misy karazany mazava tsara. Ity fampiharana ity dia mampiasa detection smart edge ary mamboatra ny sary ho azy. Aorian'izany dia azonao atao ny mamonjy ireo antontan-taratasy notarafina tao anaty horonan-tsarinao ary na manondrana ireo ho rakitra PDF koa. Misy ihany koa ny mailaka ary koa ny safidy fampidirana rahona azo alaina ao anaty ny app mba hahafahanao mamaky rakitra mora foana ary mandefa izany any amin'ny namanao na olona tsy misy olana.
Ny zavatra tokana dia, tsy manana endri-javatra sasantsasany toa ny OCR sy ny fanamarihana an-tsoratra. Ankoatr'izay, ny Evernote Scannable dia manao tsara ny fototra. Rehefa avy nandinika ireo teboka rehetra ireo ianao dia afaka misafidy Evernote Scannable raha mila traikefa fitiliana tsy misy tohika ianao.
Notebloc dia safidy iray hafa an'ny CamScanner izay manana endrika maro toa ny CamScanner.Hanombohana azy, azonao atao ny manara-maso karazana antontan-taratasy samihafa ary mamorona sary notarafina avo lenta ihany koa. Misy ihany koa ny detection smart edge izay mandeha tsara ary mora oharina amin'ny CamScanner. Ka, azo ampiasaina amin'ny toeran'ny CamScanner.
Ianao koa dia manana fanovana antontan-taratasy, scanning batch, fanohanana OCR, ary fampidirana rahona ao anaty ilay app mihitsy. Na izany aza, andao ho marin-toetra, raha ny filazanay ny mampiavaka an'i Notebloc tsara indrindra dia ny tsy fisian'ny mari-drano amin'ireo antontan-taratasy notarafina ary izany no zavatra tsara indrindra momba izany.
Naheno tamin'ny olona maro izahay fa ny CamScanner dia tonga miaraka amina riandrano lehibe tsy mitombina ary tsy manana mari-drano ao amin'ny antontan-taratasiny i Notebloc. Noho izany, raha mitady safidy CamScanner ianao raha tsy misy marika famantarana ny mari-drano dia mety ho safidy mahatalanjona ho anao i Notebloc.
Ka raha mahita izao ianareo dia ny lisitry ny sasany amin'ireo safidy tsara indrindra CamScanner izay tena ilaina ary mizara karazana setroka mitovy amin'izany ary azo ampiasaina ho solon'ny CamScanner. Ao anatin'ity lisitra ity dia misy fampiharana sasany izay fampiharana scanner feno ho azy ary misy ny sasany izay tena mahay manokana amin'ny fizahana sy fizarana rakitra na rakitra iray ihany. Miankina amin'ny zavatra takinao izany, azonao atao ny maka ny fampiharana tadiavinao avy amin'ny lisitra etsy ambony. Azonay antoka fa tsy ho diso fanantenana mihitsy ianao.
Laharana maodely iPhone 12 (A2172, A2402, A2403, A2404)
Amboary ny kaody error an'i GeForce 0x0003
tank olana 3 lalao tsy voasakana
lalana taloha tanàna feo id roblox
hulu hiala amin'ny fitaovana
tranonkala inona no azonao télécharger sarimihetsika maimaim-poana
an-trano amin'ilay sanganasa feno 123movies
karatra fanomezana amazon 10 dolara maimaimpoana